EFASOM oo ku qabatey Gobolka Hiiran Aqoon-Is-Weydaarsi ku Saabsan Mudnaanta Waxbarashada ay Leedahay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
EFASOM oo ku qabatey Gobolka Hiiran Aqoon-Is-Weydaarsi ku Saabsan Mudnaanta Waxbarashada ay Leedahay
Ururka Wadaniga ah ee Waxbarashada Loo Siman Yahay (EFASOM) ayaa ku soo gaba-gabeeyey aqoon is-weydaarsi laba maalmood socdey Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan, Soomaaliya, kaasoo socdey 15-16 Maarso 2015.
Ujjeeddada aqoon-is-weydaarsiga waxay ahayd in la tilmaamo waxyaabaha mudnaanta koowaad u ah waxbarashada Gobolka iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tayadeeda.
Guud ahaan 25 qofood oo ka kala socdey bahda waxbarashada gobolka oo ay ka mid yihiin: Gudoonka Waxbarashada ee Gobolka, maamulayaasha iyo macalimiinta dugsiyadda hoose iyo sare, Gudiga Waxbarashada, jaamacaddaha, ururadda bulshada, ururadda haweenka, iyo jaamacadaha qaarkood sida Plasma University, Hiiraan University, Central University and Western University ayaa ka qeyb-galey aqoon-is-weydaarsigaasi.
Dooda kulankaasi waxaa diirada lagu saarey in la tilmaamo waxyaabaha muhiimka u ah waxbarashada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tayaddeeda si wax looga qabto baahiyaha iyo hiigsiga waxbarashada. Sidoo kale ka qeyb-galayaasha waxa ay aad ugu hadleen guulaha ay hiigsanayaan iyo caqabadaha hortaagan dugsiyadda iyo jaamacadaha Gobolka.
Gudoonka Waxbarashada Gobolka Mudane Maxamed Macalin Cusmaan ayaa tilmaamey in dooda aqoon-is-weydaarsiga uu fursad u yahay bahda waxbarashada gobolka iney qiimeeyaan baahiyaha iyo mudnaanta waxbarashada. Wuxuu u mahad-celiyey ka qeyb-galayaasha dadaalkii ay u-galeen sidii loo ogaan lahaa waxyaabaha muhiimadda u ah waxbarashada gobolka iyo talooyinka ay ka bixiyeen sidii sare loogu qaadi lahaa tayaddeeda.
Mudane Maxamed Ibrahim Cabdi, oo Xubin ka Gudigga Jaamacada “Central University” isagoo ku hadlaya magaca ka qeyb-galayaasha wuxuu tilmaamey in gobolka Hiiraan u baahan yahay hab lagu xakameeyo tayadda waxbarashada Gobolka. “Waxaan u baahan nahay (1) in la siiyo macalimiinta tababar iyo dhiiri-gelin; (2) dugsiyo la jaan-qaada bulshada reer-miyiga sida: beeraleyda, iyo xoola-dhaqatada; (3) in barnaamijyo loo sameeyo magaalooyinka si loo caawiyo qoysaska dhaqaalahooda hooseeyo, gaar ahaan waxbarashada gabdhaha”. Wuxuu kaloo tilmaamey in tiradda macalimiintu ay ku yar tahay gobolka iyo baahida loo qabo tababarka xirfadaha iyo goobo ay wax ku bartaan caruurtu darbi-jiif ka ah.
Gudoonka Waxbarshada Gobolka ayaa wuxuu dhiiri-geliyey dadaalka loo galey qabashada aqoon-is-weydaarsigan iyo ka qeyb-galkiisa.
Kulanka waxaa hirgeliyey ururka Wadaniga ah ee Waxbarasho Loo Siman Yahay, ee EFASOM, oo ka mid ah ururadda bulshada rayid ah ee ku howlan ololaha loogu jiro in la helo xaqa waxbarasho loo dhan yahay.
Dhageyso: Bar Wareega Wararka ee Radio Dalsan 16-03-2015
Midowga Yurub oo Kordhiyay Tababarka Ciidamadda Soomaaliya